Ukulungiswa kokuFikelela kunye nesiXhobo sokubuyisela. Fikelela kuLungisa iSoftware.
Ngoba DataNumen Access Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo yemveliso yokuFumana kwakhona. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen Access Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunaye nawuphi na umntu okhuphisana naye kwimarike!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen Access Repair utshaya ukhuphiswano
ul. ULeśna 17C, 62-006 iGruszczyn
Ngomhla wamashumi amathathu kuDisemba, ngo-23
Ngapha koko nangona ekuqaleni bendicinga ukuba le yimali eninzi yokuchitha kwinkqubo encinci,
Ngapha koko nangona ekuqaleni bendicinga ukuba le yimali eninzi yokuchitha kwinkqubo encinci, DataNumen Access Repair siyifumene isiseko sedatha ke ngoku ndonwabile;)
Wow software yakho yabafana iyamangalisa ndikhuphele isoftware yesilingo kwaye ikwazile ukundibonisa zonke iitafile endinazo ngqo. Le sofware
Enkosi ngokubuyela kum. Oko ndathenga isoftware kwaye ndafumana ikhonkco lokukhuphela isoftware kwangoko. Ndiyifakile kwaye iyasebenza
DataNumen Access Repair ifumana kwakhona idatha eninzi kunayo nayiphi na enye imveliso endiyisebenzisileyo. Indincede ndagcina uninzi lweedatha ezonakalisiweyo. ndinguye
Costume Izixhobo zoLuhlu
I-Davis, CA, e-USA
ISanto Domingo, kwiRiphabhlikhi yaseDominican
Ngomhla wamashumi amathathu kuDisemba, ngo-30
Isisombululo sokulandela iimpazamo eziqhelekileyo ngenxa Ukufikelela kwiDatabase Urhwaphilizo
Isiseko sedatha 'filename.mdb' kufuneka silungiswe okanye ayisiyo fayile yedatha.
Injini yedatha yeMicrosoft Jet ayifumananga nto 'i-xxxx'.
Iirekhodi azinakufundwa; akukho mvume yokufunda kwi 'xxxx'.
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Access Repair v3.8
Inkxaso yokulungisa iMicrosoft Access 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 kunye nokuFikelela kweZiko ledatha leOfisi 365.
Inkxaso yokubuyisa ulwakhiwo kunye neerekhodi zeetafile kwindawo yolwazi yokufikelela.
Inkxaso yokufumana kwakhona i-MEMO kunye ne-OLE.
Inkxaso fumana kwakhona iitafile ezisusiweyo kwaye amarekhodi kulwazi lokuFikelela.
Inkxaso yokufumana kwakhona indawo ye-autonumber kunye nezalathiso.
Inkxaso yokubuyisa ubudlelwane.
Inkxaso yokufumana kwakhona imibuzo.
Inkxaso yokufumana kwakhona ulwazi olufihliweyo lwegama lokungena.
Inkxaso yokulungisa ukufikelela kwi-mdb kunye neefayile ze-accdb kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ukufikelela kwi-mdb kunye neefayile ze-accdb eziza kulungiswa kwikhompyuter yendawo, ngokweendlela ezithile.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yokufikelela kwi-mdb kunye neefayile ze-accdb.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayile ye-mdb kunye ne-accdb kunye nemenyu yokuma yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen Access Repair Ukufumana kwakhona iiDatha zokuFikelela kuRhwaphilizo
Xa ugcino lwedatha yakho yeMicrosoft Access (.mdb okanye .accdb iifayile) zonakele okanye zonakele kwaye awukwazi ukuzivula ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen Access Repair ukuskena iifayile kunye nokufumana kwakhona idatha kubo kangangoko kunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokufumana kwakhona nayiphi na ifayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo yokufikelela kwi-mdb / accdb nge DataNumen Access RepairNceda uvale iMicrosoft Access kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye-mdb / accdb.
Khetha ifayile yokufikelela eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ye-mdb / accdb eza kulungiswa:
Ungafaka igama lefayile ye-mdb / accdb ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen Access Repair izakugcina indawo yogcino lwedatha emiselweyo kwifayile entsha enegama elithi xxxx_fixed.mdb, apho i-xxxx ligama lefayile yomthombo mdb / accdb. Umzekelo, kwifayile eyiDamaged.mdb, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya kuba yiDamaged_fixed.mdb. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Access Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi yefayile ye-mdb / accdb. Inkqubela phambili bar
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba umthombo we-mdb / accdb ungalungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo ngolu hlobo:
Ngoku ungavula indawo emiselweyo ye-mdb / accdb eneMicrosoft Access okanye ezinye iinkqubo.
DataNumen Access Repair 3.3 ikhutshwa nge-10 kaDisemba, 2020
DataNumen Access Repair 3.1 ikhutshwa nge-31 ka-Okthobha ka-2020
DataNumen Access Repair 3.0 ikhutshwa nge-27 kaMeyi ka-2020
DataNumen Access Repair 2.9 ikhutshwa nge-18 kaNovemba ngo-2019
DataNumen Access Repair 2.8 ikhutshwa nge-5 ka-Agasti ka-2019
DataNumen Access Repair 2.7 ikhutshwa nge-18 ka-Epreli 2019
DataNumen Access Repair 2.6 ikhutshwa nge-21 kaJanuwari, 2019
DataNumen Access Repair 2.5 ikhutshwa nge-22 ka-Okthobha ka-2018
Ukufikelela kwiNkxaso yeOfisi 365.
DataNumen Access Repair 2.3 ikhutshwa nge-11 kaFebruwari, 2018
DataNumen Access Repair 2.2 ikhutshwe nge-10 ka-Agasti ka-2013
Ukuphucula ukuhambelana kwesicelo kunye ne-DAO kunye nokuFikelela.
DataNumen Access Repair 2.1 ikhutshwa ngoMeyi 15, 2009
DataNumen Access Repair 2.0 ikhutshwa ngoJulayi 16, 2008
Inkxaso ekufikeleleni koovimba beenkcukacha ngo-2007.
Inkxaso yeWindows Vista.
DataNumen Access Repair 1.2 ikhutshwa nge-19 kaNovemba ka-2006
Ukuphucula injini yokulungisa.
Inkxaso yokufumana nokukhetha iifayile ze-MDB eziza kulungiswa kwikhompyuter yendawo, ngokweendlela ezithile zokukhangela.
DataNumen Access Repair 1.1 ikhutshwa nge-20 kaDisemba, 2005
Inkxaso yokufumana kwakhona indawo ye-autonumber.
DataNumen Access Repair 1.0 ikhutshwa nge-18 kaJuni, 2004
Inkxaso yokulungisa ukufikelela kwiMicrosoft 95, 97, 2000, XP kunye no-2003.
Inkxaso yokufumana kwakhona ubume kunye neerekhodi zetheyibhile kulwazi lokufikelela.
Inkxaso yokufumana kwakhona iitafile ezisusiweyo kunye neerekhodi kuLwazi lokufikelela
Inkxaso yokulungisa ukufikelela kwiifayile ze-mdb kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, ezinjengeediski zefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yokufikelela kwiifayile ze-mdb.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayile ye-mdb kunye nemenyu yokuma yeWindows Explorer ngokulula.